HIM | Health in Myanmar » 2013 » March
New slides from AIDS Data Hub
There are new slides based on official data from Myanmar on the AIDS Data Hub website. These are massive files that take forever to download but they are worth keeping on your hard drive for reference. Jamie ++++++++++++++++++ http://www.aidsdatahub.org/en/country-profiles/myanmar?utm_source=HIV%2FAIDS+Data+Hub+Subscribers&utm_campaign=30b7f9d40f-Myanmar+Data+Alerts&utm_medium=email http://www.slideboom.com/presentations/download/316660/Myanmar%E2%80%AA-%282011%29%3A-All-Indicators%E2%80%AC
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: STD, ကျန်းမာရေး အသိ, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ကျွန်တော် အခြေအနေကို သိရဖို့ ထိုင်းက ဆေးရုံတစ်ခုမှာ ဆီးကို ထပ်ပြီးစစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က ဆစ်ဖလစ်တော့ မရှိဘူးပဲ ပြောပါတယ်။ ဆေးစစ်ချက် အောင်တယ် ဆိုပေမယ့် ထပ်စစ်ရင် ကောင်းမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဘာကို ထပ်စစ်ရမှန်း မသိဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီဆေးစစ်ချက်တွေကိုလည်း ဆရာဆီကို ထပ်ပို့ပေး လိုက်ပါတယ်။ နောက် အခုအချိန်အထိ ဖြစ်နေတာက မာစတာဗေးရှင်း လုပ်လို့ ပြီးတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ အင်္ဂါအောက်ပိုင်း အကြောတွေက သိသိသာ မာပြီး ထိတွေခံစားမှု တခု ရှိနေပါတယ်။
ထိုင်းရောက် မြန်မာ အလုပ်သမားများကြား HIV ကူးစက်နှုန်း တိုးလာ
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, ARV, HIV, NGO
နယ်စပ်နှင့် ပြည်တွင်းမှ လူနာများအား အခမဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးနေသည့် မယ်တော်ဆေးခန်းမှ ဒုတိယညွှန်ကြား ရေး မှူး ဒေါက်တာအဲ့သ၀ါ က “HIV ဖြစ်နှုန်းက တိုးလာတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ ပြောင်းရွှေ့ လုပ်သားတချို့က ကျန်းမာရေး အာမခံမရှိတော့ ဆေးဝါးမရဘူး။ ARV မရပေမယ့် သူတို့အတွက် အိမ်တိုင် ရာရောက် စောင့်ရှောက် မှုပေးတာတွေတော့ လုပ်တယ်” ဟု ပြော သည်။
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: ပညာပေး, မူးယစ်ဆေး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
အရသာ ထူးကဲပြီး အကြာကြီး စွဲစေတယ်။ စိတ်ဖြေနားနေနိုင်တယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။ အမေရိကားက လာတဲ့ကော်ဖီထဲမှာ တရုပ်ကလာတဲ့ ရိုးရာဆေး ရောထား ပါသတဲ့။ ဗီတာမင်တွေ၊ ဓါတ်ဆားတွေ၊ အာဟာရ ဓါတ်တွေ ပါတယ်လို့ ကြော်ညာပါတယ်။ မ-ဟော်မုန်း (အီစထိုဂျင်) ပါတယ်လို့လဲ ဖတ်ရပါတယ်။ ဒီဟော်မုန်းဟာ အမျိုးသမီးတွေမှာ အရွယ်ရလာရင် နည်းလာတယ်။ သွေးဆုံးရင် သိသာတယ်။ အကောင်းလဲဖြစ်စေပြီး အဆိုးလည်း ဖြစ်စေနိုင်တာ သတိပြုပါ။
အမေးအဖြေ (၁၃၂) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar, Q&Ano comments | Tags: ကျန်းမာရေး အသိ, ဆေးဝါး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
အဲဒီနိုင်ငံမှာ ဘယ်လိုစနစ်ထားလဲ သိပ်မသိပါ။ HPV ကြွက်နို့ဆိုရင် STDs အတွက် ဆရာဝန် ပြရပါမယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဆိုရင် သမားတော် တဦးပြရင် ဆိုင်ရာကို လွှဲပေးပါတယ်။ ကျားအင်္ဂါဖြစ်တာ အတွက် ဆီးလမ်း အထူးကုကိုပြတာ သင့်တော်ပါတယ်။
A comment and reply on changing CD4 thresholds too soon
The [him] moderator has permission from Thiha, the author ofacomment, to use his name in this posting. In response to the posting on changing CD4 thresholds too soon, he wrote: “That is the dumbest thing since bricks! Just how much ofahouse do you let burn down before you call the fire […]
အမေးအဖြေ (၁၃၁) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar, Q&A3 comments | Tags: ကျန်းမာရေး အသိ, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Masturbation လုပ်တာအတွက် သိပ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ အားနည်းတယ်လို့ ခံစားရရင် အကြိမ်လျှော့ပါ။ ခဏ တဖြုတ်ဖြစ်ဖြစ် နားပြီး၊ အစားအသောက် အားရှိစေမှာ စားပါ။ သွေးကျဆေးတွေမှာ တခြားဆေးတွေလိုပဲ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ ရှိတယ်။ တခုခုနဲ့ တခုတော့ မတူပါ။
Mystery about the number of people to be treated
It is impossible to tell from this article or the press release how many people will receive treatment at the end of 2016 with the anticipated funding. Eighty thousand or one hundred thousand or one hundred and twenty thousand? Why is it not stated? Jamie ++++++++++++++++++ Myanmar to receive crucial HIV/AIDS funding Rosie Gogan-Keogh Saturday, […]
Author: HimBur | Category: HIM, Myanmar, Q&Ano comments | Tags: ART, HIV, လမင်းကို, ဆေးဝါး
ဒီဆေးတွေက ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးလည်းရှိပါတယ်။ အဖြစ်များတာတွေကတော့ အသည်းကို ထိခိုက်ခြင်း၊ အာရုံကြောများ ထိခိုက်ခြင်းနဲ့ အရေပြားမှာ အကွက် ထခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးကို ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဆေးကို အချိန် မှန်မှန် သောက်သင့်ပြီး သောက်နေစဉ် ကာလတွေမှာ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသပြီး ဆေးရဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေ ရှိ/ မရှိကို အမြဲ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
AIDS ကို ကုသပျောက်ကင်းနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းရှိကြောင်း HIV ပိုးကို တွေ့ရှိခဲ့သူမှ ပြောကြား
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, HIV, နည်းလမ်း, ဆေးဝါး
(၇) ကြိမ်မြောက် International AIDS Society မှ ကြီးမှူး ကျင်းပသည့် Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention (IAS 2013) ကို မတ်လ (၂၂) ရက်နေ့တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူ မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ HIV ရောဂါနှင့် ပတ်သက်သည့် အထင်ကရ မှတ်တမ်းအသစ်ကို ချပြနိုင်ခဲ့သည်။
A reader comment on "Testing is not prevention"
A reader has commented on the posting “Testing is not prevention”. Reader: “I agree with you that testing alone can’t prevent HIV transmission. But, VCCT is not only about testing, but also include risk assessment and risk reduction counseling. It surely does affect on behaviour change of the person. VCCT should benefit both test positive […]
PLH တစ်ယောက်နဲ့ ဆက်ဆံရင်း ကွန်ဒုံး ကျွတ်သွားခဲ့ရင်
Author: HimBur | Category: HIM, Myanmar, Q&A2 comments | Tags: HIV, ကွန်ဒုံး, လမင်းကို
နောက်တစ်ချက်က မိတ်ဆွေမှာ HIV ပိုးရှိနေတာ မိန်းကလေးကို အသိပေးထားပါ သလား၊ သူမက သိနေတယ် ဆိုရင်တော့ စိတ်သောက သက်သာစေဖို့ တတ်ကျွမ်းတဲ့ သူတွေနဲ့ နှစ်သိမ့် ဆွေးနွေး တာမျိုး ပြုလုပ် သင့်ပါတယ်။